Dad cabay dawada gacmaha lagu nadiifiyo oo geeriyooday - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Dad cabay dawada gacmaha lagu nadiifiyo oo geeriyooday
Inta la xaqiijiyay 10 qof ayaa ku geeriyootay kadib markii ay cabeen walxo ka sameysan dawada jeermiska disha ee loo isticmaalo gacmaha, islamarkaana bilihii ugu dambeeyay si weyn u soo caan baxday markii Corona virus uu dilaacay.
Dhacdadaan ayaa ka dhacday gobolka Andhra Pradesh ee dalka Hindiya kadib markii la xiray dukaamadii tuulo lagu iibinayay khamriga .
Degaanka Kurichedu ayaa xayiraad la galiyay kadib markii laga helay kiisas badan oo la xiriira fayraska karona .
Taliyaha booliska deegaanka arrintu ka dhacday oo lagu magacaabo Siddharth Kaushal ayaa sheegay in dadka dhintay ay dawada jeermis dilaha ah ee lagu nadiifiyo gacmaha ku dareen biyo iyo cabitaano fudud.
Waxyaabaha dadku cabeen oo ka samaysn dhowr nooc oo ah waxyaabo la isku daray ayaa dadku bilaabeen in ay cabaan toban maalmood ka hor.
Previous articleXisbiga Wadajir” Waa tallaabo kale oo si ula kac ah Rajiimka talada haya ugu tuntay dastuurka”
Next articleUrurada bulshada rayidka ah oo Sharci daro ku tilmaamay Magacaabis ay sameeyeen xubnaha Xukuumaddii kalsoonida lagala laabtay